संक्रमितको संख्या बढेसँगै लक्षण देखिन थाल्यो
मुख्य पृष्ठसमाचार स्वास्थ्यसंक्रमितको संख्या बढेसँगै लक्षण देखिन थाल्यो
विराटनगर, १८ साउन । पछिल्लो समय देखिन थालेका कोरोना संक्रमितमा लक्षणहरु देखिन थालेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २० हजारभन्दा माथि छ । तीमध्ये १४ हजार उपचारपछि कोरोनामुक्त भएका छन् ।
कोरोनाबाट ज्यान गएकाहरूको पनि गम्भीर लक्षणका कारण नभई स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या तथा दीर्घकालीन रोगका कारण भएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर पछिल्लो समय देखिएका संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण देखिन थालेको हो ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहता पछिल्लो समय देखिएका अधिकांश संक्रमितमा केही न केही लक्षण देखिएको बताउँछन् । प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार ४४ छ । तीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमितमा लक्षण नदेखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि भएकाहरुमा लक्षण देखिएको उनले बताए ।
कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा राखिएका संक्रमित बिरामीहरूमा कुनै पनि गम्भीर लक्षण नदेखिएको अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डा. दीपक सिग्देल बताउँछन् ।
अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये सातजनालाई सामान्य रुघाखोकीको औषधि चलाए पनि अन्यलाई कुनै लक्षण नदेखिएको डाक्टर सिग्देलको भनाइ छ ।
‘केहीलाई सामान्य रुघाखोकी तथा ज्वरो जस्ता लक्षणबाहेक अन्य समस्या छैन,’ सिग्देल भन्छन्, ‘अस्पतालमा रहेका अधिकांश बिरामीमा कुनै लक्षण नै देखिएको छैन ।’
कोरोनाका बिरामीहरू एसिम्टोम्याटिक (लक्षणरहित) रहे पनि संक्रमितको संख्या भने बढिरहेको उनले बताए ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पनि कोरोना संक्रमितहरूमा सामान्य लक्षण देखिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटा बताउँछन् । अस्पतालमा रहेका संक्रमितमध्ये केहीलाई सामान्य लक्षण रहेको र अधिकांशमा लक्षण नदेखिएको उनले बताए ।
अस्पतालमा एकजनालाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नु परे पनि बिरामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यक भने नपरेको डा. निदेशले बताए ।
उपचारका लागि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताल आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितमध्ये तीनजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।